Heshiisyo Isugu Jira Amniga iyo Dhaqaalaha oo lagu wado in ay kala saxiixdaan South Africa iyo Soomaaliya. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Heshiisyo Isugu Jira Amniga iyo Dhaqaalaha oo lagu wado in ay kala...
Heshiisyo Isugu Jira Amniga iyo Dhaqaalaha oo lagu wado in ay kala saxiixdaan South Africa iyo Soomaaliya.
Wafdiga ayaa booqday Wasaaradda Gaashaadhigga iyo xarumo kale, iyagoona sidoo kale booqday xarumo ay ku keydsanyihiin taariikhda gumeystihii midab kala sooca.
“Waxyaabaha aan halkaan ka baranay waxay ahayd inaan eegno iskudhafka Ciidamada madaama ay kasoo baxeen midib kalasooca una gudbeen dimuqraadiyad iyo wadashaqeynta caawinaada labada dal iyo inay naga caawin karto Hay”adaha Amminga iyo Dastuurka” ayuu yiri.
Agaasimaha Guud Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, Sonkor Geelle ayaa isna Warbaahinta u sheegay in labada Dowladood ay kulamo kale ku kala saxiixan doonaan qodobo ay ka mid yihiin Amniga, Dhaqaallaha iyo arrimo kale oo muhiim ah.
11-kii bishan Guddoomiyaasha Barlamaannada dalalka Qaaradda Africa, ayaa kulankoodii sanadlaha ahaa ee guddoomiyaasha Baarlamaannada Africa waxaa uu ka jeediyay khudbad.
Soomaaliya oo qeyb ka ah dalalka Africa, ayaa waxaa shirkaasi uga qeyb-galayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari”.
Kulanka waxaa looga hadlayay arrimo muhim ah oo quseeya Qaarada Africa gaar ahaan dhallinyarada Africa sidii loogu diyaarin lahaa hogaaminta Siyaasadda Qaaradda iyo maamulka dhaqaallaha, iyada oo la siinayo fursadahii ay kula wareegi lahaayeen howshaas.
“Bulshada Soomaaliyeed 70% da’dooda waxay ka hooseeysaa 30 jir, halka 42% da’dooda ay u dhexeyso 14 ilaa 29 kuwaasi oo ay horyaallaan arrimo badan oo xal u baahan”, sidaasi waxaa kulanka ka sheegay Guddoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Previous articleMaqaayad ku taal Dalka Burkina Faso oo Weerar lagu qaadey ay ku dhinteen 17 Ruux.
Next articleBarlamaanka Hir-Shabeele oo Mooshin ka keeney M/weyne Cali C/llaahi Cosoble.